Maxaad Ka Taqaan Mahadhooyinkii Taariikheed EE Gen Maxamed Xasan (Jidhif)?”Halyay Libintiisa Uu Qirey Cadowgii Ay Is Hayeen” | WAJAALE NEWS
Maxaad Ka Taqaan Mahadhooyinkii Taariikheed EE Gen Maxamed Xasan (Jidhif)?”Halyay Libintiisa Uu Qirey Cadowgii Ay Is Hayeen” Qaybta 1Aad.
1.Q.1aad.Barbaarintii Hore Iyo Hanaaqaadkii noloshiisa;oo aynu kaga warami doono bilowgii noloshiisa ilaa heerarkiisii waxbarasho iyo qofka uu yahay Maxamed Xasan Cabdilaahi (JIDHIF). ilaa halgankii
2.Maalmihii Halganka ilaa Markuu Gaadhay Heerkii ugu sareeyay Ciidamada Somaliland. oo aynu ku eegi doono kaalintiisii halganka uu ku lahaa iyo doorkii uu ku lahaa dib u xoreynta Qaran iyo hirgalinta himilada Jamhuuriyada Somaliland.
Ø Waa mid ka mid ah khabiirada xaga milatariga ugu magaca dheer guud ahaan geyiga soomaalidu dagto, gaar ahaana, Somaliland.
ØWaa Aasaasihii iyo Taliyihii Guutadii 99aad Ee SNM .Waa hogaamyihii dagaalkii Xeebaha oo Ahaa Dagaalkii ugu adkaa uguna qadhaadhaa ee dhex mara jabhadii SNM iyo dawladii kacaankii Taliskii Maxmaed Siyaad Barre.
Ø Waa sarkaalkii Ugu horeeyay ee gayiga Somaliland ka taaga calan ay SNM leedahay isla markaana, inta la ogyahay taariikhda markii u horeysay qaaday cashuur lagu Qaado Magaca SNM. Goobtuna ahayd Kastamkii Saylac.
Ø Waa Aasaasihii Ciidankii Nabad Galyada Oo ahaa Ciidankii ugu horeeyay ee ka hawlgala Somaliland 1991. Isla markaana ahaa ciidankii uu ka soo unkamay ciidanka Booliska Somaliland.
Ø Waa Taliye xigeenkii U horeeyay Ee Ciidanka Booliska Somaliland Markii La aasaasay booliska 1994.
Ø Waa Aaasaasihii Hayadii Miino saarta Qaranka Ee SMAC
Ø Waa Taliyihii Hore Ee Ciidanka Qaranka Jamhuuriyada Somaliland.
v Barbaarintii Hore Iyo Hanaqaadkii Noloshiisa.
Sanadii 1963 kiina waxuu galay Dugsiga Camuud ee ku yaalay magaalada boorame isagoo ku qaatay waxbarashadiisii dugsiga dhexe.
General Maxamed Xasan Cabdilaahi (Jidhif) wuxu safka hore ka galay saraakiishii wacdaraha ka muujiyey Dagaalkii 1977 Ee Soomaaliya Iyo Itoobiya. Waana halka Markii ugu horaysay, Janaraal Jidhif ay ku soo if-baxday geesinimadiisa iyo Haybadiisa milatari ee uu Ilaahay hibada u siiyey. ilaa waqtigaasi waxaan Maskaxda saraakiishii labada dawladood ka bixi waayay kaalintii muuqatay ee uu ku lahaa guulihii dawlada Somaliya ka gaadhay dagaalkaasi, isagoo ka mid ahaa, shaqsiyaadkii dhulka la simay dhammaan biriishyadii ku yaalay dhulka Xabashida. Waxaana taasi daliil u ah, in markii danbe ee uu jabhadka noqday ee uu u talaabay itoobiya, in sarkaalkii u horeeyay ee itoobiyaanka ahaa ee qaabilay islamarkiiba aqoonsaday. taasi oo muujinaysay in uu ka mid ahaaa saraakiisha sirdoonka itoobiya xogtooda haysay.
1.Dhismaha xaruntii Taliskii Qaybta 26aad Ee Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliyeed, haatana ah dhismaha Taliska guud Ee Ciidamada Qaranka jamhuuriyada Somaliland oo fadhigeedu yahay magaalada harageysa.
2.Dhismaha warshadii caanaha oo ku taala muqdisho
3.Dhismaha wasaaradii warshadaha soomaaliya oo ku taala muqdisho iyo
4.Dhismaha Wasaaradii Gaashaandhiga Soomaaliya oo ku taala muqdisho.
…LA SOCO.. Qaybo xiise leh oo ku sahabsan dagaalkii xeebta iyo waxii kala qasaday jdhif iyo Cabdi Casiis Cali Barre iyo Morgan
F.G :Cid kastoo xog ka haysa dagaalkaa xeebaha waxaan ka codsanayaa inay ila wadaagto iyagoo iigu soo hagaajin kara cinwaankayga hoos ku xusanQalinkii:Cabdikariim Muxumed(Qaamuus)